7 လက်မကို Android 8.1 တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD
ဖေါ်ပြချက်:7 လက်မက Universal ကား Entertainment က,အန်းဒရွိုက် 8.1 က Universal ကားအသံ,အန်းဒရွိုက် 8.1 က Universal ကား Navigation
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd >7လက်မကို Android 8.1 တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD
ထွက်နိုင်ရေး: 20000 per month
မူလအစရာ: တရုတ်, ရှန်ကျန်း
HS Code ကို: 8520909090
7 လက်မတစ်လောကလုံးမော်တော်ကား DVD
1.KLYDE အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှဖွံ့ဖြိုးဆဲထုတ်လုပ်မှုနှင့် android ကားတစ်စီး dvd.We ရောင်းအတွက်အထူးပြုတဲ့ professional အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဟာ android စနစ်၏အစောဆုံးဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဟာ android အရှိဆုံး stable.Now ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်အန်းဒရွိုက် 8.1 ကိုကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ် 4core 16G.We နှင့်အတူ DVD အမြဲ clients များရဲ့ requipments.We တွေ့ဆုံရန်ထုတ်ကုန်တိုးတက်အောင် & ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစောင့်ရှောက်စသည်တို့ကိုဂျပန်, ဥရောပ, တောင်အမေရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှကနေအများအပြားလူအများကလေးစား clients များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးတည်ထောင်ခဲ့သည်။
အန်းဒရွိုက် 8.1 ၏ 2.Parameters
OS ကို: အန်းဒရွိုက် 8.1 စနစ်
CPU ကို: Rockchip PX3, Cortex-A9, Quad-core
ရမ်: Samsung DDR3 ကို 2GB
ရေဒီယို: NXP 6686
ဖန်သားပြင်: capacitive နဲ့ multi-touch screen ကို
ဗီဒီယိုကိုဒီကုဒ်ဒါ: 1080p HW
WIFI in: Built
DVR: USB ကကင်မရာ (PC ကိုစံ)
3.New function ကို: DSP
အန်းဒရွိုက်ဖြေရှင်းချက်ကိုအလိုအလျောက် DSP ဟာ့ဒ်ဝဲကိုဖတ်ရှုနိုင်, DSP နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ hardware အတွက်အသံချဲ့စက်-settings ကို၏ UIs ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဖွင့်တဲ့အခါ, DSP ကိုအကောင်းဆုံးနားထောင် setting များကိုတွက်ချက်ရန်အော်တို setted သောစပီကာများ parameters များကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံးကိုနားထောင်ခြင်းထိုင်ခုံတင်ထားရန်ယာဉ်မောင်း, copilot, RearLeft, RealRight, ကဲ့သို့သောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာနယ်ဇင်းခလုတ်ကို။
ပံ့ပိုးမှုကြေးမုံ link ကို function ကို, သင် Insight web studio ၏ဂိမ်းများ, ပုံများ, ဂီတ, တူ, ကား DVD ကိုကြီးမားတဲ့ screen ပေါ်မှာပြသရန်သင့်မတ်ဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှမဆိုအကြောင်းအရာတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အနားမှာတစ်ချိန်တည်းခြမ်းမှာ2app များကို 1024 * 600 ထိ dual-screen ကိုပြေးခွဲ
steering, wheel ထိန်းချုပ်မှု
ဒီစနစ်ကိုသင်ပြည်တွင်းရေး Sensors များအသုံးပြုတဲ့အခါ, တစ်ဦးမော်နီတာလေးအာရုံခံကိရိယာများပါဝင်သည်အစား installed မူရင်းကားတစ်စီးဓာတ်ငွေ့ nozzle ၏အာရုံခံကိရိယာသည်ပြင်ပအာရုံခံတိုက်ရိုက်မူရင်းကားတစ်စီးဓာတ်ငွေ့ nozzle အတွင်း fixed အာရုံခံကိရိယာအသုံးပြုမှုဆန့်ကျင်ခိုးယူခွံမာသီးကိုအသုံးပြုဖို့; တာယာဖိအားနှင့်အပူချိန်ကိုတိုင်းတာခြင်းအာရုံခံကိရိယာများနှင့် TPMS လက်ခံမှတာယာများ၏သတင်းအချက်အလက်များပေးပို့သည်လက်ခံက USB port ကိုအားဖြင့် DVD အရက်စွဲပေးပို့ပါ။ တာယာဖိအားနိမ့်, ဒါမှမဟုတ်ယိုစိမ့်ခြင်း, မြင့်မားသောအပူချိန်အခါမော်တော်ယာဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအာရုံစိုက်ဖို့ drivers တွေကိုသတိပေးသကဲ့သို့, DVD ကို, အသံနဲ့အလင်းမှတဆင့်တစ်ဦးစစ်မက်ရှိသည်။
ကြက်တူရွေး BLUETOOTH (optional)
(ဒွန်းသို့မဟုတ် PAN တဆင့်) အင်တာနက်
Voice ကိုအသိအမှတ်ပြု / စာသားရန်
အဆိုပါ FC6000T အဆိုပါကြက်တူရွေးကဘလူးတုသ် stack (ချယ်လ်ဆီးအသင်း) ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုပေါင်းစပ်။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းစျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်သောဖုန်းများအများစုနှင့်အတူဖောက်သည်မှ Compatibility ကိုတစ်ဦးအလွန်မြင့်မားသောအဆင့်ပေးသည်နှင့်ဖုန်းစာအုပ်နှင့် listsynchronization သည်။ FC6000T တစ်ဦးနာယကလွတ်လပ်သော Voice ကိုအသိအမှတ်ပြု (SIVR) နှင့်မိန့်ခွန်း algorithm ကို (လ်၏ TTS) ရန်တစ်စာသားသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ချေပေးထားပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖျက်သိမ်း Audio အသံလွှင့်သင့်ဒေသခံလူသိလည်းအသစ်သောချန်နယ်နှင့်တကွသင် Multi-ဒေသဆိုင်ရာဂီတခွင့်ပြုပါတယ်။ CD ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂီယာအတွက်အသံအရည်အသွေးနှင့်ဆူညံသံ-အခမဲ့ DAB ရေဒီယိုယာဉ်မှာအထူးအတွေ့အကြုံကိုပါစေ။ လိုင်းများနှင့်ဘူတာဧရိယာ၏ချဲ့ထွင်မှုအတွက်အမြဲတမ်းတိုးမကြာမီဥရောပအများစုမှ DAB သုံးစွဲနိုင်ပါစေ။
A1: ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ဟာရှာဖွေနေတဲ့ဘယ်တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး / အမည်နှင့် Dashboard ကိုရုပ်ပုံပေးပို့ပါ။
Q2: အဆိုပါအာမခံကိုဘယ်လို Long ကလား?
Q3: အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါ Remote အလုပ်မရနိုင်မလား
A3: အဆိုပါဘက်ထရီဒါဟာပါဝါထဲက Is Check ကျေးဇူးပြု.
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, ငါ့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ
Skype ကို: szklyde9
2din universal 7inch full touch car stereo အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Android dual din 6.95 "universal car dvd player အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7 လက်မက Universal ကား Entertainment က အန်းဒရွိုက် 8.1 က Universal ကားအသံ အန်းဒရွိုက် 8.1 က Universal ကား Navigation kia က Universal ကား Entertainment က9လက်မကား Entertainment က နယူး Verna ကား Entertainment က 10.1 လက်မက Universal ကား Autoradio7လက်မက Universal DVD ကို Player ကို